Chandelier - aja oriọna 6 oriọna - ụdị ifuru - na ígwè ma iko a na-arụ ọrụ - olulu anaghị etinye - Akụkụ: cm. 65 x 35 x 125h (STL) - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ 6 chandelier - n'uko oriọna ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Chandelier - okpokoro oriọna 6 ọkụ - Ifuru udi - na ígwè na-arụ ọrụ iko - ọkụ bulbs adịghị gụnyere - Akụkụ: cm. 65 x 35 x 125h (STL)
Chandelier - n'uko oriọna 6 ọkụ - ọdịdị ifuru - na ígwè ma na-arụ ọrụ iko - nchịkọta adịghị etinye - Akụkụ: cm. 65 x 35 x 125h (STL) buru ibu
okporoko: Zu-WCLG-93QC Atiya: ọkụ, Chandeliers Product ID: 7896
Dafnedesign.com - Chandelier - oriọna ụlọ na ọkụ ọkụ 6 - ọdịdị ifuru - na ígwè na-arụ ọrụ iko - nkwụnyeghị - Akụkụ: cm. 65 x 35 x 125H - Nchedo: Ekwesịrị ịrụ ọrụ na mmezi ya na ngwa ahụ agbanyụrụ. Arụ ọrụ niile ga - arụ ọrụ site na onye ọkachamara pụrụ iche - Ngbanwe ma ọ bụ ịme ihe nwere ike ime ka ngwaọrụ dị egwu. Ụlọ ọrụ ahụ na-ebelata ọrụ niile maka mmebi nke ngwaahịa ya na-agbakwunye na ụzọ nke na-adịghị agbaso ntụziaka ahụ. (STL)
Okpokoro oriọna na oké osimiri kristal akpụkpọ anụ - (UL)
Nnukwu lumen na eriri ọcha - (UL)
Ejiri ọkụ abụọ oriọna / oriọna na-acha ọkụ na kristal - dakọtara na bọlbụ klas; A, A +, A ++ - na-enweghị bulbs (DFL)
Oriọna oriọna na oghere lampshade - Kwadoro na klaasị klas; A, A +, A ++ - (UL) (Detuo)
Nkpanaka ọkụ ụmụaka maka nwa ma ọ bụ nwa (39 cm H 67 cm 39 cm)
Oriọna oriọna na violet lampshade - (UL)
Ejiri eji agba acha - cm. L30 x 40h - (DFL)
Chandelier na kristal - Akụkụ: cm. 53 x 53 x 100h - (DFL)
Oriọna pere mpe, Oke ejiri ọla okpoko na okpokoro olaedo, ø 28, H. 44. Ngwa ihe mbu, 100% emere na Italy (F4)
Mbadamba oriọna na kristal mmiri ozuzo - (UL)
Okpokoro ọkụ na nwa lampshade - Dimensions cm. 50 x 50 x 175h - (UL)